मधेसका महिलामा पुस्तान्तरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
मधेसी महिलाहरूको शैक्षिक पहुँचले समाजको लैंगिक सम्बन्धमा ब्यापक हेरफेर भइरहेको रहेछ ।
असार २७, २०७८ प्रमोद मिश्र, तुलानारायण साह
हालैको रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान घटनाले यसलाई एकपल्ट फेरि सतहमा ल्याएको छ । यही पुरानो र नयाँबीच, गणतन्त्र आएको दशक बितिसकेपछि पनि, कस्तो पौंठेजोरी चल्दै छ भन्ने बुझ्न हामीले डिसेम्बर २०१९ मा झापादेखि कैलालीसम्म मधेसयात्रा गरेका थियौं । यसअघि जनकपुर, मुसहर, सम्भ्रान्त, सीमाको समाज (‘लाइन खुलेको रात’) बारे हामीले आफ्ना कुरा यसै स्तम्भमार्फत पाठकसामु पुर्‍याइसकेका छौं ।
त्यस यात्राका दौरान मधेसमा महिलाको अवास्थाबारे पनि हामीलाई चासो थियो किनभने जात, लिंग र वर्ग नेपाली सामाजिकताका प्रमुख स्तम्भ हुन् । डिसेम्बर २०१९ देखि अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड महामारीले अनेकौं सामाजिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याई नै राखेको छ । २०२१ को जनवरी–फेब्रुअरीको बृहत् नागरिक आन्दोलनको महिला मार्चमा सपना सञ्जीवनीले मैथिलीमा ‘आब हम सीता नै बनबौ’ शीर्षक कवितावाचन गरेदेखि हालै महोत्तरीमा २६ वर्षीया सुजिता ठाकुरको उनको पतिको परिवारद्वारा गरिएको हत्यासम्मले हामीलाई मधेसमा महिलासम्बन्धी हाम्रो यात्रा–अनुभव र अनुसन्धानको सम्झना गरायो ।
हामीले झापाका घैलाडुब्बा र गौरीगन्ज एवं मोरङको कटहरीमा राजवंशी महिला–पुरुषसँग समूहमा संवाद गर्‍यौं । कैलालीमा थारू महिला–पुरुषसँग संवाद गर्‍यौं । हामीले सिरहाको राजमार्गछेउका बस्तीमा स्कुल पढ्ने यादव परिवारका किशोरीहरूसँग संवाद गर्‍यौं । सीमानजिक, सीमा र राजमार्गबीचका गाउँघरमा महिलाबारे स्त्री–पुरुष दुवैसँग संवाद गर्‍यौं । हामीले पूर्वी धनुषाको सीमावर्ती मुसलमान समुदायको बस्ती घुम्यौं । बालिकाहरूका लागि सञ्चालित स्थानीय मदरसामा पुग्यौं । हामीले समाज बदलिँदै गरेको पनि पायौं र पुरानै अवस्थामा पनि रहेको पायौं ।
मधेसी जनजाति (थारू, राजवंशी, धिमाल आदि) समाजमा अन्य मधेसी समाजमा जस्तो पर्दा प्रथा छैन । घैलाडुब्बा, गौरीगन्ज, कटहरीको राजवंशी भेलामा महिला–पुरुष गसँगै बसेर संवाद मात्र गरेका थिएनन्, हामी बाहिरियासँग, गाउँका युवा बुहारीले आफ्ना अग्रजसँग मुखामुख सवालजवाफ र वाद–प्रतिवादसमेत गरेका थिए । हजुरआमा पुस्तासँगै नातिनी पुस्ताका युवतीहरू निःसंकोच संवाद गरिराखेका थिए । पुरुषहरूको मुख्य गुनासो आफ्नो समाज अधोगतिमा गएको, पञ्चायत र त्यसपछिको शासन व्यवस्थाले राजवंशीलाई झापामा अल्पसंख्यक र असहाय बनाएको, जग्गाजमिन कानुनी वा गैरकानुनी रूपमा राजवंशीबाट पहाडेमा हस्तान्तरण गरेको भन्ने थियो भने, वर्तमान सामाजिक र लैंगिक अवस्था राम्रो लागेको हजुरआमा पुस्ताको अनुभव थियो । पहिलेको जमानामा महिलाले निकै बन्देजमा बस्नुपर्थ्यो । सासू–ससुरा, श्रीमान्, जेठाजुको खटनपटनमा बस्नुपर्थ्यो । घरआँगनबाट बाहिरफेर जान बन्देज थियो । तर आज त्यस्तो बन्देज छैन भन्ने तिनीहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, पश्चिमको कैलालीमा पनि हामीले थारू अभियन्ता र गृहिणीहरूलाई बिनापर्दा देख्यौं र हामीजस्ता बाहिरिया पुरुषहरूसँग बिनासंकोच संवाद गर्ने गरेको भेट्यौं जुन कुरा सीमावर्ती र कोर मधेसका गाउँमा कम देखिएको थियो, खास गरी सम्पन्नहरूको बस्तीमा । सम्पन्न बस्ती भन्नाले मधेसी समाजका तथाकथित उच्च र मध्यम जातकाहरू बसेको क्षेत्र ।
कैलालीमा एउटी थारू महिला पत्रकारले हामीसँगको लामो कुराकानीमा आफूलाई पिताले आफ्ना सहिद दाजुलाई जस्तै व्यवहार नगरेको, माओवादी क्रान्तिमा जान नदिएको र आफू जबरजस्ती गएपछि पिता नेतृत्वको परिवारले वर्षौंसम्म सम्बन्धविच्छेद गरेको बताइन् । यहाँसम्म कि, माओवादी पुरुष कामरेडहरूसँग एउटै घरमा गुप्तवास रहेका बेला आफ्नो काम जनअदालतमा निवेदन लेख्ने भए पनि घरमा भने आफूलाई नै खाना पकाउनेदेखि अरू घरायसी काममा लगाउने गरेको सुनाइन् । समग्रमा मधेसी महिलामध्ये मधेसका जनजाति महिलाहरूलाई हामीले बढी स्वतन्त्र पायौं ।
विराटनगरबाट हामी पश्चिम लाग्नु एक दिनअघि एउटा घरमा पाहुना बस्दा बढई (मिस्त्री) समुदायका एक आगन्तुकले स्नातकोत्तर गरी कलेज पढाउने आफ्नी छोरीका लागि वर खोज्न समस्या भएको सुनाएका थिए । आफ्नो समुदायमा पढेलेखेको वर हतपती नभेटिने उनको जिकिर थियो । हामीलाई वर खोजिदिन आग्रह गर्दै उनले योग्य भए अरू जातको पनि चल्नेसमेत बताए । ‘हामी त मधेसयात्रामा जान लागेको, भोलिदेखि सप्तरीदेखि कैलालीसम्म यात्राक्रममा तपाईंकी छोरीका लागि योग्य वर पनि नजरमा राखौंला’ भन्दा उनले भने, ‘कोशीपश्चिम त छोरी भरसक नदिने ।’ कारण सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘त्यता एक त दाइजो बढी माग्छन्; दोस्रो, दहेज आदिका नाममा छोरीको सुरक्षा कम हुन्छ ।’ हामीमध्ये मोरङमा हुर्केकालाई यो कुरा अझ कौतूहलको विषय बन्यो । वास्तवमा कोर मधेसमा यस्तै हुन्छ र भन्ने प्रश्न बारम्बार मनमा उठिरह्यो अनि मधेसमा महिलाको अवस्थालाई अझ नियालेर हेर्ने प्रेरणा दियो, यस संयोगको संवादले ।
भोलिपल्ट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सीमाबीचमा पर्ने पूर्वी सप्तरीको गोइठी गाउँमा बास बस्यौं । बिहान कतैकतै घुर ताप्दै गाउँ डुल्ने क्रममा महिलाहरूको एउटा जमघट भेट्यौं । उमेर र ओहदाअनुसार महिलाहरू टाउकाका विभिन्न भागमा घुम्टो राखेर एक बाहिरिया युवक — जो कुर्सीमा बसेका थिए — सँग संवाद गर्दै थिए । त्यो एउटा एनजीओअन्तर्गत ऋण लेनदेनसम्बन्धी, सहकारी कारोबारसम्बन्धी भेला थियो । हामी पुग्दा ती महिलाहरूमध्ये कतिपयले उमेर र ओहदाअनुसार घुम्टो टाउकाको अघि सारेको र हामीसँग बोल्न अप्ठ्यारो मानेको पायौं । तर एक छिनको चिनजानपछि तीमध्ये अलि जान्नेसुन्ने अधबैंसे महिलाले अघि सरेर हामीसँग संवाद गरिन् । ती महिलाहरूको सामान्यज्ञान, घरबाहिरको गतिविधिबारे जान्न मन लाग्यो । ‘प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको नाम के हो, थाहा छ ?’ भनेर सोध्यौं । कसैले के भने त कसैले के । त्यस भेगमा नेपाली च्यानल नआउने रहेछ, आए पनि नेपाली भाषा कम बुझ्ने भएकाले हिन्दी च्यानल ज्यादा हेर्दा रहेछन् ।
त्यस गाउँमा गाई, गोरु र भैंसीसमेतलाई जाडोमा बाक्लो कपडा ओढाएको र गाउँवरिपरिका बारीमा हरियो सागपात, तरकारी देखिन्थ्यो । तर ती महिलाहरूमध्ये अधिकांशमा रक्तअल्पताको समस्या प्रस्टै देखिन्थ्यो । हामी त्यही गाउँको मुसहर बस्तीमा पनि गयौं । तुलनात्मक रूपमा मुसहर बस्तीका महिलाहरूमा पर्दा प्रथा कम थियो र तिनले हामीसँग कुराकानी गर्नमा खासै धक मानेनन् । भ्रमणका क्रममा हामी सप्तरीका हनुमाननगर, कोइलाडी, तिलाठी र बिसनपुर; सिरहाका औरहीलगायत हुलाकी राजमार्ग छेउछाउका बस्ती; धनुषाका ठाडी झिझा; बर्दिबासको धुर्मुस–सुन्तली बस्ती र सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको पुनर्बास टोलका दलित बस्तीहरू पनि घुमेका थियौं । मधेसका दलित समुदायमा पनि हामीले महिला–पुरुष सम्बन्ध र श्रम सम्बन्ध अन्यभन्दा फरक पाएका थियौं ।
हामी बारा जिल्लाको सीमावर्ती गाउँको मध्यम जातका एउटा सम्पन्न मधेसी परिवारमा बास बस्दा त्यस घरकी गृहिणीसँग हाम्रो बिलकुलै संवाद भएन । जबकि कैलाली र झापामा थारू र राजवंशीका घरमा भोजन भान्सामा त गर्‍यौं नै, घरका छोरीबुहारीले हामीसँग निर्धक्क कुराकानीसमेत गरे । गौरीगन्जमा हामी कलेज पढ्दै गरेकी गाभुर फ्रन्टकी कार्यकर्ताकहाँ बास बस्यौं, उनी र उनका मातापिताले हामीलाई घरभित्र र माथिको कोठामा समेत बास बस्न दिए । त्यस्तै, कैलालीमा कमैया र गैरकमैया गृहस्थ परिवार दुवै ठाउँमा हामीले झापा र मोरङका राजवंशी जमघटमा जस्तै खुलेर विचार आदानप्रदान गर्‍यौं । मधेसमा सम्भ्रान्त र सम्पन्न घरका छोरीबुहारीले बाहिरिया पुरुषसँग संवाद नगर्नु र पर्दा राख्नुलाई कुलीनताको लक्षण मान्ने चलन रहेछ । यद्यपि किशोर पुस्ताले चाहिँ साइकल चढेको र आफ्नो स्कुलमा बालविवाहविरुद्ध नेतृत्व गरेको भेट्यौं । किशोरावस्था पार गरेर युवती र गृहिणी हुँदासम्म यो उदाउँदो पुस्तामा कस्तो परिवर्तन आउला, हेर्न बाँकी छ ।
कोर मधेसमा विवाहसम्बन्धी धारणामा जडता र अग्रगामी छलाङ दुवै रहेको पायौं । माथि उल्लिखित पूर्वी सप्तरीको गाउँमा बिहान घुर ताप्दै एक किसान — जो भैंसी व्यापारी पनि हुन् — सँग लामो गफियौं । उनी चार छोरीका पिता थिए । छोरीको विवाहबारे उनको अनुभव रोचक थियो । सन् २०१८ मा कान्छी छोरीको बिहा गर्दा उनले सबैभन्दा बढी दहेज दिनुपरेको थियो । उनकी छोरीले १२ कक्षासम्म पढ्नु त्यसको कारण रहेछ, ज्वाइँ झन् बढी पढेको खोज्नुपरेकाले । अघिल्ला छोरीहरूको बिहामा तुलनात्मक रूपमा कम खर्च लागेको उनले सुनाएका थिए । उनीहरू कम पढेका वा अनपढ रहेका कारण कम दहेजमै बिहा सम्भव भएको उनको बुझाइ थियो । यो चलन कोर मधेसमा सामान्यतया मध्यम जाति बस्ने बस्तीको आमकथा रहेको थाहा भयो ।
वैवाहिक सम्बन्धमा देखिएको नयाँ कुराचाहिँ पढेलेखेका नयाँ पुस्ताका मधेसी युवतीहरूले सम्बन्धविच्छेदसम्मको जोखिम मोल्ने निर्णय लिन थालेका रहेछन् । हामीले सप्तरी घर भई हाल विराटनगरमा बसोबास गरिरहेकी एउटा शिक्षित परिवारकी युवतीसँग लामो संवाद गरेका थियौं । स्नातक तहसम्मको शिक्षा पूरा गरेकी ती युवतीको विवाह विराटनगरमै स्वजातीय जागिरे इन्जिनियर युवकसँग भएको थियो । विवाहको केही महिनामै ती युवतीले सरकारी बैंकमा जागिर पाइन् । परिवारका अन्य सदस्यले जागिर नगर्न दबाब दिन थाले । जागिर गर्ने भए एक्लै नबस्ने बरु सासूलाई पनि सँगै राख्ने दबाब दिन थाले, श्रीमान् अन्तै जागिरमा रहेका कारण । परिवारबाट निरन्तर जागिर छोड्न दबाब आउन थालेपछि ती युवतीले बरु डिभोर्स लिने तर जागिर नछाड्ने निर्णय लिइन् । हामीले भेट्दा उनले डिभोर्स लिएर जागिरलाई निरन्तरता दिइरहेकी थिइन् । उनमा पूर्ण आत्मविश्वास देखिन्थ्यो र आफ्नो वैवाहिक अतीतका नमीठा कुरा पनि बेहिचक सुनाइराखेकी थिइन् ।
हामीले जनकपुर, रौतहट, बारामा पनि प्रशस्त युवतीहरू कलेज पढ्दै गरेको देख्यौं । सिम्रौनगढको एउटा उच्च माविमा पुरुषभन्दा महिला विद्यार्थीहरूको संख्या ज्यादा रहेको जानकारी पायौं । मधेसी महिलाहरूको शैक्षिक एक्स्पोजरले समाजको लैंगिक सम्बन्धमा ब्यापक हेरफेर भइरहेको आभास मिल्यो । हामी सप्तरी र महोत्तरीका जमिनदारहरूको गाउँ भनेर चिनिएका गाउँबस्ती पनि घुमेका थियौं । सँगै सप्तरीमा विद्वान्हरूको गाउँ भनेर चिनिएको बस्ती पनि घुम्यौं । पर्दा प्रथा गरिब र दलित बस्तीमा कम तर सम्पन्नहरूको बस्तीमा कठोर रहेको देखिन्थ्यो ।
तराई मधेसमा महिलाको अवस्थालाई हामीले कसरी सैद्धान्तीकरण (थ्यौराइज) गर्ने ? सम्भ्रान्त, सम्पन्न परिवारका मधेसी महिलाहरूमा अंग्रेजी शिक्षा र काठमाडौंको एक्स्पोजर नभएको खण्डमा पर्दासम्बन्धी बन्देज छ र स्त्री–पुरुषबीच संस्कारमा जात र वर्गअनुसार लैंगिक विभेद छ, जसलाई सपना सञ्जीवनीले आफ्नो कविताद्वारा उजागर गरेकी छन् । त्यस लैंगिक संस्कारको स्रोत प्रथमतः धर्मशास्त्र हो । पारम्परिक सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी मधेसी जनमानसमा वर्ण व्यवस्थाको र यसका पौराणिक तथा महाकाव्यका कथा एवं तिनको वैचारिकीको पकड अत्यन्तै बढी छ ।
यस वैचारिकीअन्तर्गत जात व्यवस्था र त्यसभित्र एउटा बालिकाको पालनपोषण, सामाजिकीकरण, शिक्षादीक्षा अनि पछि जातभित्र दुई परिवारबीच विवाहमा दहेज र अन्य जिन्सी लेनदेन महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । मधेसमा सार्वजनिक जीवनमा प्रगतिशील देखिने कतिपय शिक्षित पुरुष पनि आफ्नो परिवारको सदस्यको विवाहमा दहेजको लेनदेनमा सहभागी हुँदा रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो । दोस्रो, जात र दरदियाद अनि जातभित्र बिहार–यूपीका सीमावर्ती क्षेत्रसम्म फैलिएको नाताकुटुम्बको बलियो जालो पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, महिलाहरूको अवस्थाका लागि । तर अर्कातिर, गाउँगाउँमा खोलिएका उच्च माविहरूले गर्दा मध्यम जातका निम्नमध्यम परिवारका बालिकाहरूले पनि उच्च शिक्षामा पहुँच पाएको महसुस भयो । जिल्लाका मुख्य सहरहरूमा लोकसेवा तयारी कक्षाका बोर्डहरू प्रशस्तै देखिन्थे ।
मधेसका सहरहरूमा कस्मेटिक सामग्री र गहनाका पसलहरू पनि प्रशस्तै रहेको पायौं । त्यस्ता पसलहरूमा दिउँसो ग्रामीण भेगका महिलाहरूको प्रशस्तै भीड लाग्ने गरेको देखियो, सुनियो । गाउँगाउँमा रेमिट्यान्सका कारण महिलाहरूमा कस्मेटिक सामग्रीको खपत अत्यन्तै बढेको र आफूलाई फिटफाट देखाउने ऊर्जा देखिन्थ्यो । रेमिट्यान्ससँगै फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्ने अभ्यास बढेकाले पनि यो चलन आएको हुन सक्छ । त्यसैले त ससाना ग्रामीण बजारमा पनि ब्युटिपार्लरका बोर्डहरू प्रशस्तै देखिए, जहाँ केही महिलाले रोजगारी पाएका थिए भने अरूले शृंगार गरेर आधुनिकता र विश्वव्यापीकरणमा सहभागी हुने आकांक्षा व्यक्त गरिराखेका थिए ।
कतिपय मदरसा बालिकाहरूको शिक्षाका लागि खोलिएको पनि भेट्यौं जहाँ महिला–पुरुष दुवैले पढाइरहेका थिए । हुनेखाने परिवारका बालिकाहरू उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा बस्ने र सरकारी जागिरका लागि तयारी कक्षा (कोचिङ) लिने गर्दा रहेछन् । दिवा सेवामा चल्ने माइक्रोबस र काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरूमा खुलेका महिला छात्रावासले ग्रामीण समाजमा युवती शिक्षालाई टेवा दिएको थाहा भयो । रात्रिबस चढ्न नपर्ने, काठमाडौंलगायतका मुख्य सहरहरूमा भाडामा बस्नलाई कोठा खोजिराख्न नपर्ने, सजिलै छात्रावासमा बस्न मिल्ने भएर अभिभावकहरू पनि ढुक्क हुने अवस्था सृजना भएको अनुभव पनि कतिपयले सुनाएका थिए ।
संघीयताले मधेसलाई प्रदेश २ दिएको छ । प्रदेश सरकारले महिलाका लागि केही दूरगामी कदम चालेको छ । बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान, स्कुले बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा बिमा र प्रदेश सरकारले भर्ना गर्ने, सबै निकायमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणजस्ता कदमले गर्दा महिलाहरूमा निकै आत्मविश्वास जागेको हुनुपर्छ र आउँदो पुस्ताका महिलामा परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ, यदि यी कार्यक्रमहरू लागू भइराखे भने ।
मधेसमा गणतन्त्र आएदेखिका यी सबै अन्तरसंघर्षलाई समेट्ने नयाँ पुस्ताका उदीयमान महिला प्रतिनिधि पात्रहरू पनि सार्वजनिक मञ्चमा देखिन थालिसकेका छन् । कवितामा सपना सञ्जीवनी, पेन्टिङमा रञ्जु यादव र पल्लवी पायल उदीयमान व्यक्तित्व हुन् । सञ्जीवनीका कविताहरूमा महिला उत्पीडनको स्रोत र वैचारिकीविरुद्ध विद्रोह छ एवं त्यही भावना पल्लवी र रञ्जुका मिथिला पेन्टिङमा अभिव्यक्त भएको छ ।
समग्रमा मधेसका गाउँहरूमा परिवर्तन कछुवा गतिमा रहे पनि पुस्तान्तरण जारी छ । संघर्ष चलिरहेको छ । जनकपुरको एउटा सरकारी प्रवचन गोष्ठीमा महिला उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको पायौं तर उदाउँदो पुस्ताका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्कुले बालिकाबारे जनमानसमा चेतना जगाउने काम गरेको छ । यसको धरातलमा ठोस परिणाम, आजका बालिकाहरू भोलि महिला हुँदा कस्ता होलान्, त्यो भविष्यले बताउला तर मधेसमा पुरातन र नयाँबीच द्वन्द्वात्मक संघर्ष जारी छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:०६
सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका समाजमा पढाइभन्दा पनि द्रुत आर्थिक उपार्जनको संस्कृति विकास भएको छ । सानै उमेरदेखि सजिलै पैसा कमाउन थालेपछि लेखपढतर्फ वा मिहिनेत गर्नतर्फ रुचि मर्न थाल्छ । अवैध आर्जनले ठीक–बेठीकबीचको नैतिक सीमारेखा धमिल्याइदिन्छ ।
कार्तिक २३, २०७७ प्रमोद मिश्र, तुलानारायण साह
झापा, मोरङ र सुनसरीमा केही दिन बिताएर जब सप्तरी पस्यौं, हामीले भाडामा लिएको गाडी फेर्नुपर्‍यो । कोशीपूर्वका जिल्लाहरूमा सीमा क्षेत्रसम्मै ठीकठाक स्तरको पक्की बाटो थियो । सस्तो भाडादर भएको सानो खाले कारले पनि काम चलेको थियो । तर, कोशीपश्चिम त्यस्तो अवस्था थिएन । जताततै बाटो भत्केको थियो । त्यसैले ठूला पांग्रा भएको स्कर्पियो गाडी लिएर हामीले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिएका थियौं ।
हामी सप्तरीको सीमा क्षेत्रको पुरानो ऐतिहासिक बजार हनुमाननगर गयौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोशीमा चलाउने भनेको पानीजहाजको अन्तिम बिसौनी हनुमाननगरमै हुने चर्चा छ । हनुमाननगरको कोशी घाट नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रनजिक छ । हामी त्यहाँका बस्ती घुम्यौं । गरिबीको मार त्यहाँका अनुहार, झोपडी, लुगाफाटामा प्रस्ट देखिन्थ्यो । खण्डहर बनिसकेको हनुमाननगरमा केही समय बिताएर हामी सप्तरीका चर्चित गाउँहरू कोइलाडी र तिलाठी गयौं । फर्किंदा हामी कुनौली भन्सारबाट बन्दै गरेको सडक प्रयोग गरेर पुनः भारदह हुँदै गोइठी फर्कियौं । सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा चरम गरिबी, परम्परागत समाज र बन्दै गरेका सडक संरचनाहरू जताततै खनिएको देख्यौं । सबै किसिमले शाब्दिक रूपमै सीमान्त हुनु यसैलाई भन्छन् भन्ने लाग्यो ।
सिरहा जिल्लामा राजमार्ग छेउको धनगढी (नैनपुर) मा एक रात बसेपछि हामी दिउँसो सीमा क्षेत्रतर्फ लाग्यौं । सिरहाको सीमा क्षेत्रमा हुलाकी सडकको पुनर्निर्माण बडो जोडतोडका साथ भइरहेको थियो । हुलाकी सडक बनेपछि सीमा क्षेत्रको मधेस बिउँझेला–जिम्देला–जाग्ला जस्तो लाग्यो । सीमा क्षेत्रको कुनै गाउँमा रात काट्ने इच्छा भयो । धनुषाको ठाढी गाउँका एक परिचित फेला परे । फोन गरेपछि बस्ने व्यवस्था हुने आश्वासन मिल्यो । सिरहा बजारबाट धनुषाको ठाढी पश्चिमतिर फर्किंदा नाक सोझै पर्छ । बढीमा आधा घण्टा लाग्ला मोटरमा, बीचमा कमला नदी नहुनु हो भने । कमला नदीमा पुल नरहेकाले सीधै नेपालैनेपाल जान सकेनौं । हामीसँग दुइटा विकल्प थिए । कि सिरहा बजारबाट फेरि पूर्वपश्चिम राजमार्गको चोहर्बा पुगेर कमला पुल पार गर्ने र फेरि त्यति नै दूरी दक्षिणतर्फको कच्ची सडकको यात्रा गरेपछि ठाढी पुग्ने, कि त माडर खटौका भन्सारबाट भारतको जयनगर गएर कमला पुल पार गर्ने अनि थोरै उत्तरतर्फ आएपछि सीमा क्षेत्रको महिनाथपुर बजारबाट ठाढी पुग्ने ।
हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौं । नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा गत दुई दशकयता ‘सीमान्त’ शब्द संवादको केन्द्रमा रहेकाले पनि हामीलाई सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका समाज हेर्न मन थियो । सजिलै वारपार गर्न सकिने सिमानाबाट यसो भारत भ्रमण पनि हुने । सोहीअनुरूप हामी सिरहा बजारबाट दक्षिणतर्फ लाग्यौं । नेपाल–भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीको चेकिङ थियो । त्यो खटौका भन्सार रहेछ । सशस्त्रको बर्दीकी, आदिवासी जनजाति देखिने, यस्तै बीस–पच्चीस वर्षकी महिला प्रहरीले आदेशिलो–रोबिलो बोलीमा कहाँ जाने, किन जाने, कहाँबाट आएको, अरू कोही छ आदि कुरा सोधिन् । हामीले धनुषाको महिनाथपुरबाट ठाढी गाउँ जाने भन्यौं । ‘गाडीमा के–के सामान छ ?’ अमेरिकाबाट रिसर्च गर्न आएको, सिरक, ब्ल्यांकेट र अन्य लगेजहरू छन् भनेपछि जान दिइन् ।
सिरहाको धनगढी बजारबाट हिँडेपछि र माडरबाट भारत छिरुन्जेल सिरहा जिल्लामा जति बेर हामी घुम्यौं, अधिकांश मानिस मधेसी देखिएका थिए तर सीमाको चेकपोस्टमा सबै प्रहरी पहाडे मात्र । हामीले कुरा गर्‍यौं– सायद यसैलाई आन्तरिक औपनिवेशीकरण भन्दा होलान् ।
कुनै बेला सिरहाको खटौका भन्सारको ठेकेदार कृष्णप्रसाद कोइराला थिए । बीपी कोइरालाको बाल्यकालबारे लेखिएका लेख र पुस्तकमा खटौका भन्सारको चर्चा पढ्न पाइन्छ । बीपीको बाल्यकालको केही समय त्यहीँ बितेको थियो । कृष्णप्रसाद कोइरालाले पहाडबाट बेसार बेच्न आएका गरिबहरूका लुगा पोको पारेर त्यही खटौका भन्सारबाटै राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पठाएका थिए । त्यसबापत कोइराला परिवारले सम्पत्ति जफत र प्रवासको पीडा भोग्नुपरेको थियो । हामी यस्तै गन्थन–मन्थन गर्दै भारत पस्यौं ।
भारततर्फको बेतौनहा पोस्टमा भारतीय प्रहरीहरूको चेकिङ थियो । त्यहाँबाट बेला बाँधको बाटो हुँदै कमला पुल पार गर्‍यौं । हामी जयनगर बजारमा प्रवेश नगरीकनै ओसराही चोक पुग्यौं । त्यहाँ जताततै चनाको सातु बिक्री भइरहेको थियो, हामीले पनि एक पाकेट किन्यौं । दशगजाको ढिस्को छेवैछेउ कच्ची बाटो थियो । कुनै ठाउँमा अति साँघुरो तर ढलान गरेको बाटो थियो त कुनै ठाउँमा धूले खाल्डाखुल्डी । हाम्रो स्कर्पियो झल्ट्याङझुल्टुङ गर्दै अगाडि बढ्यो । गाडीचालक चौधरीजीले हामी किन यस्तो बाटोबाट गाउँगाउँ गइराखेका छौं भन्ने भेउ पाएका थिएनन् । झमक्क साँझ पर्नै लागेकाले बोर्डरपारि अलिअलि भय पनि लागिरहेको थियो । बोर्डरमा हामीलाई सतर्क भएर जान पनि भनिएको थियो ।
देउदहा, सिमरारी, छतौनीको बरगाछी नजिकबाट सोध्दासोध्दै हामी महिनाथपुर पुग्यौं । महिनाथपुर नेपालतर्फको बजार होला भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ । पूरै बजार भारततर्फ रहेछ । बजार पार गरेपछि रेलवे स्टेसन आउँछ जुन नेपालतर्फ पर्दो रहेछ । जयनगर–जनकपुर रेलवे लाइन । नेपालतर्फ पनि महिनाथपुर नै भनिन्छ । सानो चोक छ । त्यहाँ रोकिएर हामीले चिया खायौं । फेरि सशस्त्र प्रहरीहरूको दर्शन भयो, सबै अनुहार पहाडे नै । सामान चेक गराई भत्केको रेललाइन पार गरेर गाडी रोक्यौं ।
दशगजा छेउमै ससानो इँटाभट्टा जस्तोमा गोबर गुइँठाको चाङ लगाइएको थियो । सम्पर्कसूत्र आइसकेपछि हामी बाटोछेउको उनको घरमा पुग्यौं । घर ओसिलो र साँघुरो थियो । लगत्तै गाउँका केही भद्र पुरुष (झा, मिश्र, गोइत, दास थरका) आगन्तुक देखेर आइपुगे । एक छिन कुराकानी गर्‍यौं । तीमध्ये एक जना पहाडमा शिक्षक भई सेवानिवृत्त भएका रहेछन् । सदियौंदेखि गोत्र–मूलकै घनचक्करमा अल्झेर पहिचान बनाउन बाध्य भएका तिनले थर थाहा पाउनेबित्तिकै गोत्र अनि मूल सोधिहाले । बढी जान्ने भएर गोत्रको उच्चारण सच्याए र मूलको उत्तर सन्तोषजनक नभेटेपछि जुरुक्क उठेर हिँडे । हामीले त्यस साँघुरो ठाउँमा रात काट्न गाह्रो पर्ला कि भनेपछि सम्पर्कसूत्रले आफ्ना काकाकहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाए । काकाको सिमेन्टको घर निर्माणाधीन हुँदाहुँदै पनि बस्नयोग्य थियो । साँझ हातमुख धोएपछि गाउँका केही अगुवाहरूसँग कुराकानी गर्‍यौं ।
घुर संवाद : खाना खाइसकेपछि हामी मुसलमान बस्तीमा घुर खोज्न थाल्यौं । एक छिन हिँडेपछि एक ठाउँमा एक वृद्ध र केही बच्चा घुर ताप्दै गरेको भेटिए । हामी खुसी भयौं र कुराकानी सुरु गर्‍यौं । त्यहाँ बसेकाहरू एउटै घरका हजुरबुबा, बुबा र नाति थिए । हजुरबुबाको नाम बसुवा शाह (फकिर), छोराको नाम आरिफ शाह रहेछ । त्यस परिवारको पेसाचाहिँ स्थानीय बजारमा कुखुराको मासु बेच्ने रहेछ । फकिर त वृद्ध थिए, छोराको उमेर तीस–पैंतीस वर्ष हुँदो हो । नाति बाह्र–तेह्र वर्षका थिए । तर नातिचाहिँ पढ्न नमान्ने भन्ने परिवारको गुनासो थियो । फकिरले भने, ‘स्कुल जाँदैन । पासपोर्ट बनाइदेऊ, विदेश जान्छु भन्छ । अबको दुई–चार वर्षमा पासपोर्ट बनाएर विदेश पठाइदिने हो ।’
दोस्रो घुर संवाद त्यही टोलका अताबुल नामका व्यक्तिको घरअगाडि गरेका थियौं । त्यहाँ स्थानीय इँटाभट्टाका सञ्चालक सिठु यादव पनि थिए । एक जनाले भने, ‘म कांग्रेसको मानिस हुँ तर मधेस आन्दोलनमा खुबै सक्रिय थिएँ । दिनदिनै जुलुस, नारा लगाउन जनकपुर जान्थें । तर, यी मधेसिया नेताहरू पनि त्यस्तै भए, जस्तो कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू थिए । सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।’
ठाढी गाउँमा मुसलमान, यादव, साह र ब्राह्मणको बस्ती छ । मुसलमान बस्तीमा नयाँनयाँ पक्की घर बनेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । त्यो बस्ती देखेपछि लाग्छ, मधेसमा रेमिट्यान्सको पैसाको सबैभन्दा पहिलो काम घर बनाउने रहेछ । जताततै नयाँनयाँ घर बन्दै गरेका । दूरदराजको देहातमा पनि हार्डवेयरका पसल प्रशस्तै खुलेका थिए ।
रेमिट्यान्सको आगमन भएपछि गाउँमा युवाहरूको पढाइमा भन्दा पनि पासपोर्ट बनाउनमा रुचि बढी भएको छ । ठाढीको मुसलमान बस्तीमा दुइटा मदरसा छन् । एउटामा हामी पस्यौं । झन्डै सय बालिकाहरू पढ्दै थिए । मधेसमा युवतीहरू विदेश जाने चलन छैन । शिक्षामा अलि ध्यान दिइयो भने बालिकाहरूको शिक्षामा नयाँ फड्को देखिन सक्छ । गाउँका घुर संवादहरू सकेर आएपछि केही स्थानीय र शिक्षकसँग कुराकानी भयो । ती सबै हिन्दु थिए । दुई जना यादव र एक जना साह । कुराकानीको सिलसिलामा उनीहरूले भने, ‘यहाँ मुसलमानको बाहुल्य छ तर वडाको निर्वाचनमा धेरै राजनीति खेलेर हिन्दुलाई जितायौं । एउटा मात्रै मुसलमान उठेको भए उनीहरू नै जित्ने थिए । हामीले पोलिटिक्स खेलेर दुई जना मुसलमानलाई उठाइदियौं, यता हिन्दु एक जना मात्र । बल्ल हाम्रो हिन्दुले चुनाव जित्यो ।’
हामी राति बडो कष्टका साथ सुत्यौं । बीस दिनको पूरै यात्रामा त्यही एउटा रात थियो जहाँ हामीलाई एउटै ओछ्यानमा साँघुरिएर सुत्नुपर्‍यो । शौचालय नजिकै थियो तर पानी टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपर्ने । त्यसमा फेरि रातभरि अनौठो आवाज आइरह्यो । जसोतसो रात काट्यौं । मूलबाटोबाट अलग त्यस साँघुरो गल्लीमा पनि त्यो अनौठो आवाज मोटरसाइकल आवतजावतको रहेछ । हामीले लख काट्यौं– रातभरिमा कम्तीमा एक हजार पटक मोटरसाइकल हामी सुतेको घरको अगाडिबाट ओहोरदोहोर गरेको हुनुपर्छ । रातभरि गुडुडुडु–गुडुडुडु गरेको गर्‍यै । राति शौचालय जानुपर्दा देख्यौं– गुड्दै गरेका मोटरसाइकलमा अटी–नअटी सामानको चाङ ।
बिहानै हामीले स्थानीयसँग सोध्यौं, ‘रातभरि किन त्यत्रा विधि मोटरसाइकल हिँडेका ? कहाँ हिँडेका ती युवक ? के बोकेर ?’ तिनले भने, ‘भारतको सीमावर्ती सहर जयनगर, महिनाथपुरबाट तस्करी हुँदै थियो । हिजो राति लाइन खुलेको रात थियो ।’ भोलिपल्ट बिहान हामी नजिकैको गाउँ झिझातर्फ लाग्यौं । फाँटमा पुगेपछि देख्यौं– बाटाबाटामा झोपडी आकारका रक्सीभट्टी खुलेका रहेछन् । यो रेमिट्यान्सको कमाल हुनुपर्छ भन्दै कुरा पनि गर्‍यौं । झिझा पासवानहरूको गाउँ हो । सुरुकै घरमा एक शिक्षकले करिब बीस बालबालिकालाई ट्युसन पढाउँदै थिए ।
हामी गाउँमा पस्यौं । एकाबिहानै बोर्डिङ स्कुलको ठूलो बस आएको रहेछ । राम्राराम्रा लुगा लगाएका, ब्याग बोकेका बच्चाहरू बस चढेर इङ्लिस माध्यमको ‘बोर्डिङ’ स्कुल जाँदै थिए । अर्को स्कुलको भ्यान पनि आएको रहेछ । गाउँमा बाटो ढलान गरिएको थियो । मानिसहरू हृष्टपुष्ट देखिन्थे । झिझाको इतिहास डरलाग्दो सुनेका थियौं तर वर्तमान बिलकुल फरक देखियो । बच्चाहरू पढ्न जाने, युवाहरू विदेश गएर फर्केका ।
केही पुराना मानिसहरूसँग कुराकानी गरीवरी फर्केर फेरि ठाढीमा आई खाना खायौं र यदुकहातर्फ लाग्यौं । हिँड्नुअगाडि एउटा पानपसल देखेर पान खान रोकियौं । बाटामा अनौठो दृश्य देख्यौं । बाटो दुवैतर्फ ढलान भएको तर बीचको करिब सय मिटर बिनाढलानको । हामीलाई अनौठो लाग्यो । सोध्यौं, ‘यस्तो किन ?’ पानपसलेले भने, ‘निर्वाचनमा जितेको वडाध्यक्षलाई भोट नदिएका मानिसहरूको घरअगाडिको बाटो हो, त्यसैले नबनेको ।’ ग्रामीण समाजमा भोट, निर्माणको काम, द्वन्द्व कसरी एकअर्कासँग गाँसिएका रहेछन् भन्ने सोचेर हामी अचम्मित भयौं ।
लाइन खुलेको रात : मधेसका शास्त्रीय अध्येता फ्रेडरिक गेजका अनुसार (१९७५), नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रलाई मूलतः चार थरी समस्याले गाँजेका छन्– अस्पष्ट सीमारेखा, आपराधिक गतिविधि, तस्करी र अप्रवासन । काठमाडौंका मिडियामा अस्पष्ट सीमारेखाबारे अनेक विवादको कभरेज भइरहन्छ । प्रायः भारतले सीमा मिचेको शीर्षकको समाचार छापिन्छ । खुला सिमानाका कारण दुवैतर्फका सीमाञ्चलमा अपराध हुनु पुरानो समस्या हो । दुवै देशका अपराधीहरू एक देशमा गएर अपराध गर्ने र अर्को देशमा आएर लुक्ने गर्छन् । सम्भवतः यही कारण सीमाक्षेत्र एक प्रकारले अपराधको क्रीडास्थल मानिन्छ । यस विषयमा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच बेलाबेलामा तनाव र सहकार्य दुवै हुने गर्छ ।
आप्रवासन पनि समस्या हो । भारत ठूलो देश भएका कारण नेपालतर्फबाट गएका मानिसहरू त्यहाँ सजिलै अटाउँदा रहेछन् तर भारतबाट थोरै मात्रै नेपाल पसे भने यहाँको जनसांख्यिक बनोटमा उथलपुथल आउन सक्छ । त्यसकारण यो पनि काठमाडौंका मिडियामा व्यापक चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । त्यसरी नै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी पनि एउटा अनौठो समस्या छ । माथि नै भनियो, ठाढीमा हामी बसेको घरअगाडिबाट राति हजारौंपटक मोटरसाइकल कुदेका थिए, जुन लाइन खुलेको रात थियो । नेपालमा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू भारतबाट आउने गर्छन् । त्यस क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, भारतबाट औपचारिक आयात जति हुन्छ, त्यसभन्दा बढी तस्करी हुन्छ । सीमा क्षेत्रका सहरबजारबाट तस्करी गर्ने पनि अनेक तरिका हुँदा रहेछन् । सीमा क्षेत्रका व्यापारीहरूले नै सबै लाइन मिलाउँछन् ।
भारततर्फको प्रादेशिक प्रहरी सामेल हुन्छ । जस्तो– गण्डक पश्चिमको सीमा क्षेत्रमा उत्तरप्रदेश प्रहरी हुन्छ भने पर्सापूर्वको सीमा क्षेत्रमा बिहार प्रहरी । त्यसका साथै सन् २००१ देखि भारतले सीमा सुरक्षा बल पनि तैनाथ गरेको छ । हरेक तीन–चार किलोमिटरको दूरीमा सीमा सुरक्षा बलको पोस्ट राखिएको छ । मधेसमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव विस्तार भएपछि भारतले सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको थियो । सन् २००७ को जनवरीमा मधेसमा ठूलो आन्दोलन भएपछि नेपाल सरकारले पनि त्यही वर्षको मार्चदेखि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालतर्फ करिब सात–आठ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राखिएको छ । त्यसका अलावा नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो काम गरिआएको छ ।
लाइन खुल्नुको अर्थ हो– सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूको सहमतिमा तस्करी हुनु । हामी बसेको रात भारतको महिनाथपुर र नेपालको ठाढी क्षेत्रमा लाइन मिलेको रहेछ । भारतको जयनगर वा महिनाथपुरबाट ओसारिएको सामान नेपालतर्फको लक्षित स्थानसम्म पुर्‍याउन मोटरसाइकल प्रयोग हुँदो रहेछ । पुर्‍याउने मान्छेलाई भरिया, बिलेकिया वा क्यारियर भन्दा रहेछन् । सीमाक्षेत्रको समस्याबारे गरिएका अनेकौं अध्ययनमा तस्करीको समाजशास्त्र र व्याकरणबारे वर्णन पाइन्छ । सीमा क्षेत्रमा सानै उमेरदेखि मानिसहरू ओसारपसारमा संलग्न हुँदा रहेछन् । सुरुसुरुमा दिनको समय दुई–चार किलो सामग्री ओसारपसारबाट कारोबार सुरु गरिन्छ । बानी बसेपछि त्यस्ता मानिसमध्ये धेरैको पेसा नै त्यही भइदिन्छ । दिउँसोको समयमा प्रशस्तै महिलाहरू यस्ता काममा लागेका हुन्छन् । एक अध्ययनअनुसार, पश्चिम तराईको सीमावर्ती भारतीय प्रान्त उत्तरप्रदेशको बहराइच कारागारमा सयौं महिलाहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् । बिहारका जेलहरूमा पनि त्यति नै नेपाली महिला र पुरुषहरू थुनिएका हुन सक्छन् ।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी प्रहरी प्रशासनका लागि पैसा कमाउने ‘एटीएम’ सरहको कारोबार बनेको छ । हामीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पत्ता लगाउँदा तस्करहरूले सामान पुर्‍याउने अन्तिम स्थान र सीमा क्षेत्रका बीचमा पर्ने सबै प्रहरी पोस्टलाई मिलाएका हुने रहेछन् । सीमा क्षेत्रको प्रशासन र सुरक्षा निकाय नमिली लाइन मिल्नै सक्दैन । यो धेरै पुरानो कुरा हो । नयाँ प्रशासक वा सुरक्षा प्रमुखहरू सरुवा भएर आउँदा आफ्नो प्रभाव देखाउन सुरुसुरुमा यसमा केही कडाइ गरिन्छ । यदाकदा तस्करीका सामग्रीहरू पक्राउ गरिन्छ । कहिलेकाहीँ देखाउनकै लागि पनि यस्तो हुने गर्छ । कुरा मिलेपछि सब थोक सामान्य हुँदो रहेछ ।
सामानहरूको तस्करी भारतबाट मात्रै हुने होइन, नेपालबाट पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यो पनि पुरानै समस्या हो । अन्य देशबाट सहुलियत दरमा नेपालले पाउने सामग्रीहरूको तस्करी भारततर्फ हुँदो रहेछ । गेजका अनुसार, सन् १९५० र ६० को दशकताका रुस, चीन, युरोपबाट प्राप्त हुने सिमेन्ट, चिनी, कपडा, कलम, साइकलको व्यापक मात्रामा भारततर्फ तस्करी हुन्थ्यो । जंगल फँडानी भएका बेला काठबाहेक सनपाट, धान र वस्तुभाउ पनि नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको कुरा दुवै देशका संसद्मा समेत चर्चा हुने गर्थ्यो । अचेल चुरेको ढुंगा–गिट्टी र तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी, केराउ/मटर आदि भारततर्फ तस्करी हुने गर्छन् ।
तस्करीका बेला मोटरसाइकल, सामान र मान्छेसमेत पक्राउ परे भने तिनलाई छुटाउने गज्जबको तरिका रहेछ । सामानलाई मिलेमतोमा भन्सार कार्यालयले लिलामी गर्छ । त्यस्तो कार्यमा प्रायः भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरूको प्रयोग भएको हुन्छ । पक्राउ परेपछि भन्सार कार्यालयले त्यस्ता मोटरसाइकलहरू थोकमा लिलाम गर्छ । तर मान्छेको सवालमा चाखलाग्दो बन्दोबस्त हुन्छ । प्रायः मान्छे समातिए पनि पैसा खाएर भगाइन्छ र तस्कर भागेको देखाइन्छ । समातिएको मान्छेलाई यदाकदा जेल पनि पठाइन्छ, तर प्रायः सामान र मोटरसाइकल बराबरको मूल्यांकन गरेर धरौटी बुझायो भने मान्छे छुटिहाल्छ ।
शिक्षाका कुरा : सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका समाजमा पढाइभन्दा पनि द्रुत आर्थिक उपार्जनको लत/संस्कृति विकास भएको देखिन्छ । दुवैतर्फका सीमान्त राज्यद्वारा उपेक्षित त छँदै छन्, केन्द्रीकृत राष्ट्रका लागि सुरक्षा तैनाथीबाहेक । बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि सरसामानको ओसारपसारमा संलग्न हुन्छन् । थोरबहुत पैसा हात पर्न थाल्छ । परिवारमा गरिबी रहेकै हुन्छ । थोरै पनि आम्दानी अभिभावकका लागि लोभलाग्दो हुन्छ । तिनै बालबालिका युवा अवस्थामा पुग्दासम्म जोखिम मोल्ने खालका भइसक्छन् । सानै उमेरदेखि सजिलै पैसा कमाउन थालेपछि बालबालिकामा स्कुले लेखपढतर्फ वा मिहिनेत गर्नतर्फ रुचि मर्न थाल्छ । अवैध आर्जनले ठीक–बेठीकबीचको नैतिक सीमारेखा धमिल्याइदिन्छ । अलिक महँगा सामानहरू (लागूपदार्थ) पनि तस्करी गर्न थाल्छन् । मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । कतिपयले आफ्नै कारोबार गर्छन् त कतिपयले व्यापारीहरूका लागि भरियाको काम गर्छन् । यसरी सीमा क्षेत्रमा शिक्षाभन्दा पनि तस्करी र अपराधको जालो फैलिरहेको हुन्छ र सन्तति–दर–सन्तति भ्रष्टीकृत भएर आपराधिक वृत्तितर्फ ढल्किन्छन्, दिगो र दूरगामी उपलब्धिका लागि परिश्रम गर्नुको सट्टा ।
(मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभाग प्रमुख हुन् भने साह नेपाल मधेस फाउन्डेसनमा आबद्ध छन् ।)
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७७ ०८:५१